तङ्ग्रिँदै गरेको पार्टी प्यालेस व्यवसाय कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन भाइरस’ ले पुनः थलिने त्रास | Notebazar
✍️ अञ्जना सुवेदी।
काठमाण्डौं । १३मंसिर, २०७८, सोमबार / Nov 29, 2021 17:47:pm
विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीले थलिएकाे पार्टी प्यालेस व्यवसायमा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट 'ओमिक्रोन भाइरस' भित्रिएर पुनः सुस्ताउने भय व्यवसायीमा थपिएको छ । कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरका कारण २० महिना थलिएर भर्खरै तङ्ग्रिन लागेको व्यवसायमा फेरि नयाँ भेरियन्ट भित्रिएर पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने त्रासमा पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुमा बढेकाे हाे ।
नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ्ग महासंघका अध्यक्ष लीला बहादुर जिसी केही दिनयता दक्षिण अफ्रिकामा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट देखापरेको खबरहरुले पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुमा अझ बढी त्रास थपिएको बताउँछन् । उक्त नयाँ भेरियन्ट नेपालमा प्रवेश गरेपछि पुनः पहिलाकै अवस्थामा जानुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उनको भनाई छ ।
“करिब डेढ वर्षदेखि बन्द रहेका पार्टी प्यालेसहरुले आफ्नो मर्मत संहारमा खर्च गरिरहेका छन् । फेरि एउटा आशंका कहाँनिर छ भने नेपालमा कोभिडको तेस्रो भेरियन्ट आएर बोझमाथि बोझ थपिने त होइन भन्ने त्रास पनि छ ।” जिसी भन्छन् “यो महिना हाम्रो सिजन पनि हो, व्यवसायीहरु यतिबेला पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ्गहरु मर्मत संभार तथा सजावटमा व्यस्त छन् । यो समयमा कोभिड तीव्र रूपमा फैलिरहेको पत्ता लागेपछि अहिलेको यो भाइरस व्यवसायीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ ।”
केही दिनयता दक्षिण अफ्रिकामा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट देखापरेको खबरहरुले पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरु अझ बढी त्रास थपिएको छ । उक्त नयाँ भेरियन्ट नेपालमा प्रवेश गरे देश पुनः पहिलाकै जस्ताे लकडाउनकाे अवस्थामा जानुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ । कोभिड संक्रमण घटेसँगै यतिबेला काठमाण्डौंमा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ्गलाई सेवा दिन भ्याई नभ्याई छ ।
केही महिना अघि देखि नै विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यहरुका लागि बुकिङ्ग आउन थालेपछि व्यवसायीहरु पुराना ऋण तथा दायित्व घट्नेमा आशावादी रहेका थिए । तर नोभेम्बर २४ तारिखमा पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पाइएको कोभिडको यो भेरिअन्ट क्यानडा, बेलायत, बोत्स्वाना, बेल्जियम, हङकङ अनि इजरेलमा समेत भेटिएपछि विश्व समुदायमा नै चिन्ता थपिएको छ । सुरुमा चीनको वुहानमा देखिएको भाइरसभन्दा उग्र रूपमा फरक र तीव्र रूपमा फैलिरहेको पत्ता लागेपछि अहिले यो भेरियन्ट विश्वको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
केही दिनयता दक्षिण अफ्रिकामा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट देखापरेको खबरहरुले पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरु अझ बढी त्रास थपिएको छ । उक्त नयाँ भेरियन्ट नेपालमा प्रवेश गरे देश पुनः पहिलाकै जस्ताे लकडाउनकाे अवस्थामा जानुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ ।बेलायतका विज्ञहरुका अनुसार उक्त भेरियन्ट अहिलेसम्म देखापरेका कोरोना भाइरसको सबैभन्दा खराब भेरियन्ट रहेको दाबी गरेका छन् । उक्त नयाँ भेरियन्ट नेपालमा खुल्ला सीमा रहेको छिमेकी मुलक भारत र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल भित्रनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा बढ्दै गएको राजनितिक जमघट साथै भीडभाडबाट जोखिम बढ्दै गइरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भारतसँग सीमाना जोडिएका नाकामा रहेका सहायता कक्ष स्थापना गरी विदेशबाट आउने व्यक्तिमा ओमिक्रोन भाइरसको सङ्क्रमण छ वा छैन भनेर निगरानी बढाइएको बताए । विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको र ती व्यक्तिमा कस्तो लक्षण देखिएको छ, सोको पनि निगरानी गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपालमा अहिलेसम्म नदेखिए पनि फैलने भने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। “नेपालमा पनि उक्त भाइरस फैलिने सम्भावना उच्च रहेको छ”, सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले भने, “तर हामी फैलिन नदिनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छौं ।”
पच्चिस बढी पार्टी प्यालेस पूर्ण रुपमा बन्द
विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड संक्रमणका कारण सरकारले लगाएको बन्दाबन्दीका कारण धेरै व्यवसायहरु ठप्प भए । त्यसको असरबाट पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ्ग व्यवसाय पनि अछुतो रहेन । डेढ वर्षसम्म व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अधिकांश पार्टी प्यालेस व्यावसायी मारमा परे । लिजमा जग्गा तथा घर लिएर सञ्चालन गरिएको व्यवसायीहरुलाई निरन्तरता दिन नै धौ धौ भयो ।
महामारी रोक्न जारी बन्दाबन्दीका कारण लामो समय व्यवसाय गर्न नपाउँदा धेरै व्यवसायी तथा पार्टी प्यालेसहरुले व्यवसायबाट विश्राम लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् अध्यक्ष जिसी । जिसी भन्छन्,“बन्द भएका पार्टी प्यालेसहरुमा अहिले कतै सोरुम कतै स्टोरहरु र कतै कुखुरा पालन गरेको पाइएको छ ।”
महासंघका अध्यक्ष जिसीका अनुसार महासंघमा आबद्ध भएका नै १६ वटा पार्टी प्यालेसहरु यस अवधिमा पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् । महासंघमा आबद्ध नभएका अन्य करिब दर्जन पार्टी प्यालेसहरु बन्द भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।
पचास प्रतिशत व्यवसायी पलायनको बाटोमा
सरकारले अबौं लगानी रहेको पार्टी प्यालेस क्षेत्रका लागि राज्यले राहत तथा पुनरुत्थानको प्याकेज नल्याउँदा व्यवसायमा आबद्द आधा व्यवसायीहरु लगानी डुबेर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यति लामो समय व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर व्यवसायी प्रताडित भएपनि सरकारले नहेरेको उनीहरु बताउँछन् । सरकारबाट राहत पाउनको सट्टा उल्टै बरु व्यवसायीहरु दण्डित हुनुपरेको उनीहरुको दुःखेसो छ । अघिल्लो लकडाउनको समयमा बैंकहरुबाट सहुलीयत कर्जा नपाएको तथा साहुबाट एक महिनाको समेत भाडा छुट नहुँदा व्यवसायीहरुको ढाड नै सेकिएको उनीहरु बताउँछन् ।
महासंघका अध्यक्ष जिसीका अनुसार कोभिड महामारीको तेस्रो भेरियन्ट फैलिएर देशमा पुनः लकडाउनको अवस्था आए सबैजसो व्यवसायीले व्यवसायलाई निरन्तरता दिनसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
देश पुनः बन्दाबन्दीमा गएको खण्डमा यस क्षेत्रमा आवद्ध ५० प्रतिशत व्यवसायीले व्यवसाय छाड्ने सम्भावना बढेको उनी बताउँछन् । कतैबाट पनि सहयोग नपाएका कारण पार्टी प्यालेसमा मजदुर नै कटौती गर्नुपरेको समेत जिसीले बताए ।
“हामीले लकडाउनको समयमा सरकारबाट कुनै राहत पाएनौं, उल्टै हामीले ढिला विवरण बुझाएको भनेर दण्डित हुनुपरेको अवस्था थियो । महासंघका अध्यक्ष जिसी भन्छन् “लकडाउनको समयमा बैंकले पनि हामीलाई एक रुपैयाँ पनि छुट गरेन्, व्याजदर पनि घटाइदिएन्, घर तथा जग्गावालाहरुले पनि एक महिनाको भाडा छुट दिएनन् ।”
उनले थपे “अबौं लगानी रहेको यस क्षेत्रमा ५० हजार मजदुरले रोजगारी पाएका थिए । हामीले ती मजदुरहरुलाई पार्टी प्यालेस छोडाउन बाध्य भएका थियौं । तलब तथा बस्न खान दिनसक्ने अवस्था नभएपछि जागिर नै छोडाउन बाध्य भयौं ।”
पहिलाकै अवस्थामा फर्किन कम्तिमा डेढ वर्ष लाग्ने
यतिबेला काठमाण्डौंका पार्टी प्यालेसहरुको व्यस्ततालाई हेर्ने हो भने व्यवसाय कोभिडको लहर आउनुभन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ । तुलनात्मक हिसाबमा पहिलेकै अवस्थामा पुगेको भए पनि संख्यात्मक हिसाबले पहिलेका अवस्थामा नपुगेको अध्यक्ष जिसी बताउँछन् । लामो बन्दाबन्दीले ढाड सेकिएका व्यवसायीहरु तङ्ग्रिदै गरेको अवस्था छ ।
“तुलनात्मक हिसाबले पहिलेकै अवस्थामा फर्किएको छ । तर अहिले कोभिडको कारणले संख्यामा कटौति छ । पहिला एउटा विवाहमा १ हजार ५०० जना बोलाउने र जन्ती पनि ७०० जनासम्म आउने गर्थे भने अहिले त्यो संख्या आधा घटेको छ ।” उनले भने ।
कार्यक्रम गर्नेको संख्या कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा तुलनात्मक हिसाबले बराबर रहे पनि संख्यात्मक हिसाबले हाल निकै कम छ । अघिल्ला चरणका लकडाउनमा जिल्ला प्रसासन कार्यालयहरुले विवाहमा २५ जनाभन्दा कम व्यक्तिहरु मात्र सहभागि हुन पाउने सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको थियो । सरकारले गरेको यो व्यवस्थाको प्रत्यक्ष असरले पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ्ग व्यवसायीलाई नराम्रोसँग धक्का लागेको थियो ।
एउटा पार्टी प्यालेसको स्थापनाका लागि व्यवसायीले न्यूनतम डेढ करोड देखि १२ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको पार्टी प्यालेस तथा क्याटिरिङ्ग व्यवसायबाट ५० हजारभन्दा बढीको संख्यामा रोजगारी पाएका छन् । नेपालमा पार्टी प्यालेस तथा क्याटिरिङ्ग महासंघमा मात्रै करिब ७ हजार पार्टी प्यालेसहरु आबद्ध रहेको अध्यक्ष जिसी बताउँछन् । कोभिड १९ महामारी अघि ५० हजार हाराहारीले रोजगारी पाएका थिए । तर कोभिडपछि यस संख्यामा निकै कमी आएको अध्यक्ष जिसीले जनाएका छन् ।
अध्यक्ष जिसीका अनुसार आगामी दिनमा लकडाउन नभइदिए अबको डेढ वर्षपछि मात्र पहिलाकै अवस्थामा पुगिने अनुमान छ ।